Ndingaite Sei Kuti Ndiwedzere Kuwedzeredzwa Kune Anofambidzana ne iPhone? Heino Kugadzirisa! - Iphone
foni yangu yakanamatira pawhite apple screen
iphone 5 hapana basa t nhare
iphone 6s kupisa uye bhatiri kupera
gadzirisa iphone 6 bhatiri rinobuda
Iwe uri kurwara uye waneta nekufonera shamwari yako yekuwedzera pese paunovafonera. Neraki, iwe unogona kusevha shamwari yako yekuwedzera nhamba mune yako iPhone mazita. Muchikamu chino, ini ndinokuratidza iwe maitiro ekuwedzera kuwedzera kune iyo iPhone kero !
Maitiro Ekuwedzera Kuwedzeredza Kune Anofambidzana ne iPhone
Kuti uwedzere kuwedzerwa kune iyo iPhone yekubata, tanga nekuvhura iyo Yekubatana app uye tora zita reiye waunofarira waunoda kuwedzera kuwedzererwa. Wobva wadzvanya Hora mukona yekumusoro-kurudyi kona yekona. Tinya panhamba yako yekufona uye iyo pad pad ichaonekwa. Ita shuwa kuti chako chituko chakamiswa mushure memhamba.
Pane iyo pad pad, tinya + * # bhatani muzasi rekuruboshwe-kona, wobva wadzvanya kumbomira . Comma ichaonekwa panopera nhamba yako yefoni yekutaurirana.
Chekupedzisira, shandisa iyo pad pad yekuisa iyo yekuwedzera iwe yaunoda kufona otomatiki, wobva wadzvanya Zvaitwa mukona yekumusoro-kurudyi kona yekona. Zvino, pese paunodana iyi nhare, kuwedzeredzwa kuchazongo daidzirwa.
matambudziko emuchato nekuda kwevana vokurera
Kugadzira Kumbomira Kwakareba
Kana iwe uchida kuti kumbomira kuve kwakareba pakati pekufona nhamba yako yekubata uye nekuwedzera kwavo, unogona kubaya iyo kumbomira bhatani kakawanda kana uchigadzirisa yavo yekuonana ruzivo. Pese paunobata, comma nyowani ichaonekwa kurudyi yenhamba yako yefoni yekutaurirana.
Uchishandisa Iyo 'Mirira' Bhatani Kubata Akasiyana Nhare mbozha
Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchitaurirana newatsva wekubata, kana kana iyo netiweki yefoni yako yaunoshandisa yaunoshandisa ichangobva kuvandudzwa, ungangodaro usinga zive kuti uchafanira kumirira kwenguva yakareba sei usati wakwanisa kudhaya kuwedzera kwavo.
Nekubaya mira panzvimbo yekumbomira, yako iPhone inomirira iwe kuti usayine painofanira kufona iyo yekuwedzera iwe yawakawedzera kune wako wekubata.
Kuita kuti yako iPhone imirire isati yadhaya yekuwedzera, vhura iyo Yekushandisa app uye tora pane waunofarira waunoda kuwedzera chiwedzerwa. Wobva wadzvanya Hora mukona yekumusoro-kurudyi kona ye iPhone yako kuratidza.
Tevere, tinya nhamba yako yekubata iyo iwe yaunoda kuwedzera iyo yekuwedzera. Tinya iyo + * # bhatani mukona rezasi reruboshwe reratidziro, wobva wadzvanya mira . Semicolon ichaonekwa mushure mekunge yako nhamba yekubata.
Iye zvino, nyora kuwedzerwa kwekubatana kwako mushure memusicolon. Paunenge iwe wawedzera iyo yekuwedzera, pombi Zvaitwa mukona yekumusoro kurudyi kwechiratidziro.
Nzira Yokudana Sei A Kukurukurirana Nekumirira Kuwedzeredzwa
Izvozvi kuti kuwedzerwa kwekumirira kumisikidzwa kune yako iPhone kuonana, aya ndiwo maratidziro achaita mamiriro acho: uchafonera waunosangana naye uye wotungamirirwa kunhare yavo yenhare. Paunokurudzirwa kufona yekuwedzera, tinya bhatani girini bhatani padhuze nepazasi pekuratidzwa kwe iPhone yako. Izvi zvinodaidzira kuwedzerwa kwawakachengetera shamwari yako.
Iwe wakabudirira kuwedzera kune imwe yevaunotaura navo uye hauzombokanganwa kuti ungawedzera sei kuwedzerwa kune iyo iPhone kuonana zvakare! Isu tinovimba iwe uchagovana ichi chinyorwa pasocial media, kana kutisiira isu mhinduro pasi pazasi kana iwe uine chero mimwe mibvunzo nezve yako iPhone.